Arsenal oo badelka macalin Unai Emery u aragta tababare horey u soo maamulay kooxda Barcelona – Gool FM
Arsenal oo badelka macalin Unai Emery u aragta tababare horey u soo maamulay kooxda Barcelona
Dajiye November 10, 2019
(London) 10 Nof 2019. Saraakiisha kooxda Arsenal ayaa waxay xiriir la sameeyeen macalinkii hore ee naadiga Barcelona, si uu u hogaamiyo Gunners inta lagu gudi jiro xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa sheegay in agaasimaha ciyaaraha kooxda Arsenal ee Raul Sanllehi uu bilaabay inuu sii tilmaamo musharixiinta la filayo inay badel u noqon karaan tababare Unai Emery.
Arsenal ayaa la dhibtooneysa hoos u dhac ku yimid heerka natiijooyinka ee kulamada horyaalka Ingiriiska, waxayna haatan ku jiraan booska 6-aad ee dhanka kala sareynta Premier League, kaddib guuldarradii ay xalay kal kulmeen Leicester City.
Arsenal ayaa guuldaro xanuun badan kala soo kulantay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay King Power Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 2-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 12-aa ee horyaalka Premier League.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu dhinaca kale tilmaamay in agaasimaha ciyaaraha kooxda Arsenal ee Raul Sanllehi uu xiriir la sameeyay macalinkii hore naadiga Barcelona Luis Enrique, wuxuuna rajeynayaa inuu heshiis la galo si uu u qabto shaqada tababarka Gunners isla xilli ciyaareedkan.
Luis Enrique ma uusan hogaamin wax koox ah tan iyo markii uu ka tagay shaqada tababarka xulka qaranka Spain bishii Juun sababa la xiriira xanuun haleelay gabadhiisa.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester United Iyo Brighton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey